सुकुम्बासी विष्णु पौडेलले कसरी ठडाए भैंसेपाटीमा करोडौंको यो बंगला - EKalopati
राजनीति भन्ने जिनिस नै यस्तै । यही आडमा हिजो हात्तीछाप चप्पल पड्काउदै शहर छिरेका र राजनीतिमा होमिएकाहरु आज अर्बाै सम्पत्तिका मालिक बन्न सफल भएका छन् ।
यस्ता पात्र र प्रवृत्ति राजनीतिमा धेरै देख्न पाइन्छ । तिनै मध्येका एक हुन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल । जो बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिए । तिनैलाई निर्दाेष सावित गर्ने प्रधानमन्त्री,मन्त्रीदेखि नेकपाकै नेताहरुलाई भ्याइ नभ्याई छ । अहिले चर्चा र बहसको बिषय बनिरहेको छ बालुवाटारको ‘आठ आना’ जग्गा । यो सरकारी जग्गा कीर्ते गरी पौडेलले आफ्ना पुत्र नविन पौडेलको नाममा पारिएको छ ।
पचासका दशकसम्म सुकुम्वासी भनिएका विष्णु पौडेल एक दशकमा करोडपति र अर्काै दशकमा अर्बाैको सम्पति थुपारिसकेकका छन् । यो सम्पत्तिको स्रोत के हो ? अरुलाई लाग्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा नेताहरुलाई चाहिँ लाग्ने कि नलाग्ने ?
Previous articleहुम्लामा अज्ञात रोगबाट मत्यु हुनेको संख्या १० पुग्यो
Next articleआर्थिक चलेखेलका कारण चितवनको वर्डफ्लु गोप्य